News & Events | Visakha Foundation News & Events – Page2– Visakha
Visakha » News & Events
၂၀၁၈ ခုနှစ် မတ်လ (၁၇)ရက်နေ့၌ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ပြည်သူ့ဥယျာဉ်တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့နှင့် မြန်မာနိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ အမျိုးသမီး ကော်မတီတို့မှ ကြီးမှူးကျင်းပသော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးများနေ့Read More
၂၀၁၈ ခုနှစ် မတ်လ (၁၇)ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့ ပြည်သူ့ဥယျာဉ်၌ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အမျိုးသမီး ကော်မတီမှ ကြီးမှူးကျင်းပတဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးများ နေ့ကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် “၀ိသာခါဖောင်ဒေးရှင်း”Read More
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၈)ရက်နေ့ နေပြည်တော်ရှိ MICC-2 တွင် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးရေးရာ ကော်မတီက ဦးစီးကျင်းပသော “အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးများနေ့” အခမ်းအနား၌ ၀ိသာခါဖောင်ဒေးရှင်းRead More
(၁၆) ကြိမ်မြောက် မျက်စိအလင်းဒါနလှူဒါန်းခြင်း
၂၀၁၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၀/၁၁/၁၂) ရက်နေ့ တို့တွင် ဝိသာခါဖာင်ဒေးရှင်း၏ (၁၆) ကြိမ်မြောက် မျက်စိအလင်းဒါနလှူဒါန်းခြင်းအဖြစ် “၀ိသာခါ ဖောင်ဒေးရှင်း” ”TMW Enterprise Limited”Read More
၂၀၁၈ ခုနှစ် မတ်လ (၂၄) ရက်မှ (၂၇)ရက်အထိ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ သံတွဲခရိုင်၊ နန်းချောင်းရှိ သီတဂူ မေတ္တာ စက္ခုဒါနဆေးရုံတော်တွင် “သီတဂူ သာသနာပြုအဖွဲ့” နှင့်Read More
ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနား ခရီးစဉ်
ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့သို့ ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၄)ရက်နေ့မှ (၈)ရက်နေ့အထိ ၀ိသာခါဖောင်ဒေးရှင်း ၏ လှုပ်ရှားမှုခရီးစဉ်မှာ ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အညီ ကျန်းမာရေးနှင့် ပညာရေးဆောင်ရွက်ချက်နှစ်ခုကို လှုပ်ရှားနိုင်ခဲ့ ပါသည်။ ကျန်းမာရေးလှုပ်ရှားမှုအနေဖြင့်Read More
+9597855 2599, +9594025 81928,
+9594512 30251
2019 © All Rights Reserved. Visakha Foundation. Powered By Source Code Co., Ltd.